Wasiirkii Amniga Jubbaland oo ka baxsadey Dowlada – Radio Baidoa
War hadda soo dhacay ayaa waxaa uu sheegayaan in Xabsi uu ku xirnaa uu ka baxsaday wasiirkii Wasaaradda Amniga jubbaland Cabdi Rashiid Xasan Cabdi Nuur Janan,kaas oo dhowrkii bilood ee la soo dhaafay u xirnaa dowladda Soomaaliya.
Taliye kuxigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Zakiya Xuseen Amed ayaa xaqiijisey baxsashada Wasiirka,iyada oo sheegtay in laamaha Amniga Soomaaliya ay ku raadjoogaan,inkastoo aysan shaacin halka uu ku xirnaa.
“Wasiirkii hore Amniga Jubbaland Cabdirashid Xasan (Janan) ayaa saakay ka baxsaday halkii u ku xirnaa, heyadaha amniga ayaa ku raad jooga inay gacanta kusoo dhigaan eedeysanahaas oo loo haysto danbiyo kala duwan, shacabkuna ay soo wargaliyaan hadii ay arkaan ayay tiri’Taliye Zakiya.
31-kii Bishii Agoosto ee Sanadkii 2019 ayaa Dowladda Soomaaliya ay xirtey Cabdi Rashiid Janan xilli uu ka dhoofayey Garoonka diyaaradaha Mudisho,waxaana lagu eedeeyey in dambiyo kala duwan uu ka geystay deegaano ka tirsan Gobolka Hiiraan.
Madaxweyne Waare oo kulan la qaatey Hay’adaha Samafalka